Qodobada ugu muhiimsan ee war-murtiyeedkii shalay laga soo saaray shirka London (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Qodobada ugu muhiimsan ee war-murtiyeedkii shalay laga soo saaray shirka London (AKHRISO)
Waxaa maalintii shalay magaalada London ee caasimadda dalka UK lagu soo gaba-gabeeyay shir looga hadlaayay arrimaha Soomaaliya, kaas oo ay ka qeyb-galeen madax badan oo ka kala yimid in ka badan 50 dal oo caalamka ka mid ah.
Shirkaasi oo ay si wadajir ah u shir gudoominayeen ra’iisul wasaaraha dalka UK Theresa May, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guteres ayaa waxaa ka qeyb galay in ka badan 50 dowladood iyo ururo caalami ah oo daneeya arrimaha Soomaaliya.
Madaxda shirkaasi ka qeyb-gashay shirka oo si weyn uga hadlay xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay si buuxda ula wareegto masu’uuliyadda ammaankeeda ayaa si wadajir usoo saaray war-murtiyeed dhowr qodob ka kooban.
War-murtiyeedkaasi ayaa loo kala dhigay dhowr qeybood, waxaana qodobadda ku qoran ka mid ahaa arrimaha bani’aadanimada, xoojinta amniga dalka, xasilooni siyaasadeed oo loo dhan yahay, dardar-gelinta dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo qorshaha cusub ee taageeradda dowladda federaalka Soomaaliya.
1- Arrimaha Bani’aadanimada
Qodobkaan ayaa ka koobsanaa illaa shan qodob, waxaana ugu muhiimsanaa in walaac laga muujiyay xaaladda bani’aadanimo ee xilligaan Soomaaliya ka jirta, waxaana Soomaaliya loogu deeqay $600 boqol oo milyan oo doollarka Mareykanka ah, kaas oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen, lana aqoonsaday dadaalada guddiga gurmadka iyo dadka kale ee is-xilqaamay.
Inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya lagu ammaanay sida ay ahmiyadda weyn u siisay gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana sameeysay wasaarad qaabilsan arimaha gargaarka ayaa hadane waxaa si wadajir la isku af-gartay in la sameeyo qorshe lagu caawinaayo dadkaasi, si dhaqaale abuur loogu sameeyo, islamarkaana looga fogaado in markale ay dadkaasi la kulmaan dhibaato ceynkaan oo kale ah.
2- Xoojinta Amniga Qaranka
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee qodobkaan ayaa kamid ahaa in lagu taageeray codsigii dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in laga qaado xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya, si hub iyo saanad militery ah ay usoo iibsan karto, si ay ula dagaalanto Al-shabaab islamarkaana ay dalka xasilooni kusoo dabaasho.
Sidoo kale, waxyaabaha kale ee qodobkaan looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha amniga qaranka ee dowladda federaalka Sooomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka, oo ay ku heshiiyeen 16-ka bishii lasoo dhaafay.
Hadaba marka laga hadlaayo amniga, waxaa shirka maanta lagu taageeray horumarinta hanaanka maamul maaliyadeed ee dalka lagu lafa-guri doonno, shir daba socda shirka maalintii shalay lasoo gaba-gabeeyay, kaas oo la qaban doonno bisha October ee sanadkaan 2017-ka.
3- Xasilooni siyaasadeed oo loo dhan yahay
Qodobkaan oo ahaa mid aad u muhiimsan ayaa waxaa lagu xusay in ahmiyadda ay leedahay hanaanka dib u eegista dastuurka oo keeni kara horumarinta amniga iyo xasiloonida siyaasadda oo ka dhalata dalka Soomaaliya.
War-murtiyeedka ayaa lagu sheegay in shirka lagu taageeray xoojinta wada-shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka, si doorasho qof iyo cod ah ay dalka uga dhacdo marka la gaaro sanadka 2021-ka.
Sidoo kale, shirka maalintii shalay ayaa lagu go’aamiyay ahmiyadda ay leedahay in lasii wado wada-hadaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, iyadoo lagu soo dhaweeyay hamiga ay dowladu arrintaasi u heyso.
Dhinac kale, war-murtiyeedka ayaa lagu sheegay in doorashada ka dhici doonto deegaanada Somaliland bisha November ee sanadkaan 2017-ka ay keeni doonto fursad lagu dar-dar gelinaayo wadahadalka u dhaxeeya labada dhinac.
4- Dardar-gelinta dib usoo kabashada dhaqaalaha dalka
War-murtiyeedka ayaa lagu sheegay in la hormariyo dhaqaale xoogan ay keeni karto in nolshada dadka Soomaaliyeed kor loo qaado, lana sameeyo shaqo abuur.
Xoojinta dakhliga gudaha ayaa waxay aas-aas u tahay in la yareeyo u nuglaansha baaraha in la adkeeyo xasiloonida ayaa qeyb ka ah horumarinta iyo u adkeysiga xaaladaha adag una baahan in la sameeyo qorshe horumarineed oo joogto ah.
Shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ayaa ah kuwo muhiim u ah noloshada dalka Soomaaliyeed isla markaana waxaa ay qeyb weyn ka qaataan kabaca dhaqaalaha dalka, waxaana loo baahan yahay in la xaqiijiyo bankigayada ay xiriirka ganacsi la leeyihiin, isla markaana la dejiyo shuruucdii lagu hagi lahaa.
Waxaa war-murtiyeedka lagu soo dhaweeyay qorshaha dowladda cusub, kaas oo ah la dagaalanka musuq-maasuqa, iyadoo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadane lagu adkeeyay inay xoojiyaan arintaan isla markaana talaabo adag laga qaado dadka lagu helo musuq-maasuq iyo wax isdaba-marinta.
5- Qorshaha cusub ee taageeridda Soomaaliya
Qodobka ugu dambeeya ee warmurtiyeedka ayaa ah qorshaha cusub ee taageerada Soomaaliya iyadoo la garowsday in qorshaha horumarinta qaranka uu yahay kan lagu wada shaqeyn doono, gaar ahaan amniga, dhismaha hay’adaha dowliga ah, xuquuqul insaanka, ku dhaqanka sharciga, maamul wanaaga, la dagaalanka musuq-maasuqa iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka.